Ifoto yokwenyani yeXiaomi Mi 9 kwibhokisi eneenkcukacha zayo eziphambili kunye nokuqinisekisa uyilo lwangaphambili | Zonke iinkonzo ze-intanethi
El Xiaomi Mi 9 icwangciselwe ukuba ibe semthethweni ngomhla ngolwesiThathu ozayo. Umphathi we-Xiaomi u-Lei Jun kunye noMongameli u-Lin Bin batyhila ulwazi oluninzi olusemthethweni malunga neempawu eziphambili ze-Mi 9 ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo.
Ngeli xesha, Ifoto ephilayo ye-smartphone kunye nebhokisi yayo yokuthengisa iye yavela kutshanje. Ifilimu ekhuselayo ekhoyo kwiscreen seMi 9 inezinye zeempawu zayo ezichaziweyo. Siyazicacisa!
Njengoko ubona kumfanekiso ongezantsi, iXiaomi Mi 9 iya kunikwa amandla liqonga elihambayo Qualcomm Snapdragon 855 7 nm, njengoko bekutshiwo kwasekuqaleni. Inqaku lesibini elikhankanyiweyo kukuseta kwekhamera kathathu kweekhamera ezingama-48-megapixel ezibanzi zeekhamera zeSony eyenzelwe ukuba ibekwe kwiglasi yomhlaba eyi-3D.
Ifoto ebukhoma yeXiaomi Mi 9 ebhokisini eneenkcukacha eziphambili
IXiaomi Mi 9 ikwabonisa iskena sokubonisa ngeminweOko kukuthi isizukulwana sesihlanu. Iphaneli yitekhnoloji ye-AMOLED kunye nee-intshi ezingama-6.39 ezi-diagonal. Njengoko inkampani sele iqinisekisile, isisombululo se-FullHD + esixhaswe sisitayile samanzi se-Mi 9 siza kuzisa umlinganiso we-90.7% wesikrini ukuya kumzimba.
Ifoto evuzayo ikwabonisa ukuba iMi 9 ixhotyisiwe Inkxaso yokukhawuleza ukutshaja ngaphandle kwamacingo angama-20 iqinisekiswe yiJamani Rhine TUV. Inkqubo ye- I-Huawei Mate 20 Pro, eyaziswa kunyaka ophelileyo, ixhasa kuphela ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwe-15W.Ifowuni ikwabonakala ngathi iyadlala kwisilevu esincinci kakhulu. Ngapha koko, ubukhulu be-3,6mm kuphela, Imidlalo ye-Mi 9 esilevini esincinci esakhe sabonwa kwi-smartphone.
Kukwakho namahemuhemu okuba i Xiaomi Mi 9 uHlelo lokuHlola Iikhamera zangasemva ze-quad ziya kuziswa kunye ne-Xiaomi Mi 9 smartphone ngoFebruwari 20. Ushicilelo loHlaziyo lunokubandakanya i-10GB okanye i-12GB ye-RAM. Kucingelwa ukuba i-Mi 9 inokuba nexabiso le-3,499 yuan (~ 456 euros) kunye noHlelo lokuHlola lweMi 9 lunokuxabiswa nge-5,999 yuan (~ 782 euros).
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Ifoto yokwenyani yeXiaomi Mi 9 kwibhokisi eneenkcukacha zayo eziphambili kunye nokuqinisekisa uyilo lwangaphambili